Izay rehetra mila ho fantatrao momba ny "fotoana tsara indrindra" | Martech Zone
Raha tsy mizara hafa mihitsy aho fotoana tsara indrindra infographic, Faly aho fa ity no farany. Ary manantena tokoa aho fa hizara izany koa ianao. Misento mafy aho isaky ny mahita a fotoana tsara indrindra Sary torohay. Fotoana tsara indrindra handefasana tweet. Fotoana tsara indrindra hanavaozana amin'ny Facebook. Fotoana tsara handefasana mailaka. Fotoana tsara indrindra hanavaozana an'i LinkedIn. Fotoana tsara indrindra hanaovana bilaogy. Argh… tena lasa adala tanteraka aho.
Isaky ny mizara ny iray amin'ireo infografika ireo ny olona dia tsikaritro fa malaza izaitsizy tokoa izy ireo ary diso fanantenana marina. Fa avy eo aho mijery ireo orinasam-pandraharahana na ny fizotran'ny olona nizara azy ary zara raha namoaka na inona na inona izy ireo. Aza miraharaha izay ataon'olon-kafa, tandremo ny fandraisan'ny mpihaino sy ny mpiara-monina fiarahamonina, fizarana, fandraisana anjara ary ireo niova fo. Jereo ny Analytics - ary diniho tsara ireo faritry ny fotoana rehefa manapa-kevitra ianao hoe amin'ny fotoana mety indrindra.
Rahoviana aho no mieritreritra ny fotoana mety indrindra hamoahana? Vantany vao vita ny fanoratanao. Rahoviana aho no mieritreritra ny fotoana mety indrindra hanavaozana ny media sosialy? Rehefa manam-potoana ianao ary manana zavatra sarobidy zaraina. Mitohy mitombo ny fanarahana anay ary mitombo ny isan'ny fanontana anay na eo aza ny fandaharam-potoanay amin'ny famoahana.
Matotra… hazakazaka ity fa tsy fihodinana hafainganam-pandeha. Aroso ny lasantsy ary araho tsara ny fiara rehefa mandeha ianao. Ny fiara mandresy amin'ny hazakazaka dia tsy eo afovoan'ny fonosana, mivoaka mialoha.
Tags: fotoana tsara indrindrafotoana tsara indrindra infographicfotoana tsara indrindrafotoana tsara indrindra handefasanafotoana tsara indrindra hamoahanafotoana tsara indrindra handefasana mailakafotoana tsara indrindra hanaovana bitsikafotoana tsara indrindra hanavaozana ny facebookfotoana tsara indrindra hanavaozana an'i linkin